ayaan daran Qaybtii labaad | www.saaxil.tk
ayaan daran part 2
waa diyaarintii cabdi samed baashe
Canab oo kacsan baa tagtay gurigii Asli, waxayna u sheegtay wixii qabsaday, Asli way qososhaya, waxayna ku tidhi “Maxaa ka macna ah ma nin baad waayeeysaa.
Asli waxaa fikraddeeda ku soo dhacay, gabadhu waaba yar tahaye, maxaa badaa geliyay may waxbarashadeeda iska wadato. Canab waxay Asli u soo martay in ay gurigooda u raacdo, hase yeeshe Asli hooyadeed ayaa maalin suuqa ku maqnayd guriguna cidluu ahaa.
Canab oo lamiga tagsi Hodan geeya ku sugeysaa ayaa waxaa loo joojiyey baabuur ay saaran yihiin laba wiil oo midkood ay si fiican isku yaqaanaan, Canab wey faraxday, “Haye Cali”, ayey tidhi inta ay gadhigii hore u fuushay, Cali wuxuu u sheegay inuu dhowr bilood raadinaayey, wuxuuna baray ninkii la socdey oo magaciisu ahaa Caddaawe, markii cabbaar la kaftamaayey oo loo dhowaaday gurigii Canab buu Cali yidhi, “Canabey wali ma sidii baa gaadhka lagaaga hayaa”. Intaanay jawaabin buu ku adkeeyey in caawa iyada iyo gabadh kale oo saaxiibadeed ah isaga iyo Caddaawe ay marti qaadeen.
Canab waxay tidhi, “Anigu waa imaanayaa, hase yeeshee saaxiibadday waa miskiinad aan balwad lahayn, umana una maleyn maayo haddii ay I soo raacdo in ay faa’iido idiin leedahay”. Caddaawe ayaa qoslay oo yidhi “Anigu waxaan ka helaa gabdhahaa masaakiinta ah ee aamuska badan bal adigu gacantayda ku soo hubso aad aragtid sida aan u aqaan sida gabdhaha ugub loo godlee”.
Canab baa Cali oo hinqaday inuu jawaabo hadalkii ka dhifsatay oo tidhi “Oo ma cabsi galineysaa gabadha”. “Xamar xisaab baa taal”, buu ku war ceshey Caddaawe.
Cali oo muddo aamusnaa baa yidhi: “Canabeey inta aad gabadh shaki ku jiro aad noo soo kaxaynaysid, maad mid la hubo noo keentid”. Intaanay Canab hadlin Caddaawe yidhi “Anigu gabadha aan tii Canab sheegtay ahayn ma rabo”.
Goor Casar ah baa Canab is dul taagtay Asli oo hurudda, markaas bay ku shiday Radiyihi oo ay ka socotey hees macaan oo Magool qaadeysay, markay toostay bay ku booday labada daan ka dhunkatay oo ku tidhi; “Iska waran saxiib beryahan kuma arage”. Sow innagii doraad wada joogney,” Bey Asli ugu jawaabtay waxaana dhex maray dooddan
-Asliyey.. Caawa sidaan filaayo, waxa barnaamij ah malihid bay ila tahay.
-Barnaamij caynkaas ah ma lihi, waxaan doonayaa in aan soo booqdo uun Habar yartey oo deggan Kaaraan.
-Koyeeri baan ka raacayaa Afar-iridood.
Canab oo ka baqeysa in hadalkeeda la maqlo baa intay ku soo dhowaatay Asli ku tidhi, “Saaxiibey haddii aad ogaan lahayd caawa barnaamijka aan inoo hayo waad qosli lahayd” Intaanay hadalkii dhammeystirin baa Asli farxad la soo boodday oo tidhi” Ma riwaayad fiican baa socota?” “Maya riwaayad maxay qiimo leedahay.. Waxaan shalay subax la kulmay wiil aan aad isugu dheer nahay, muddo badanna aan is raadinaynay, caawa ayuuna labadeenaba na casuumay, wuxuuna wataa Baabuur, wuxuuna ina geynayaa Jungal”.
Asli dhugmo uma lahayn hadalkii Canab waxaa madaxeeda ku wareegayey, oo haddii saaxiibkeed casuumay may tagto, maxaan anigu dhexdooda ka samaynayaa… “Anigu ma socdo ee kaligaa tag”, ayay Asli jawaab niyadda ka soo go’day ku tidh.
Canab ereygaas aad bay uga naxday inkastoo aanay muujin, waxayna tidhi, “Walaal macaan Asli, jilbahaan ku haystaa, ha i ceebayn, waan ku baryayaaye, ballan ayaan qaaday, maxaa ku jaba… aniga iyo saaxiibkey waxaan garanay in aan ku casunno.. waxba ha ka biqin, waa loo baahan yahay in aan saaxiibkaa barto adna keyga baratid”.
Asli intii hadalka Canab ay dhegeysaneysay bay go’aan qaadatay iyadoo leh, mar haddii saddex qof aad tihiin wax xumaan ahi dhici maayaan ee saaxiibadaa raac yaanay kaa cadhoone.
-Siddeeda Caawa…ee waqtigii wuu dhow yahaye dhaqso u lebbiso.
lasoco qaybta 2aad::::
heeso wadaniya taariikh nololeedkii govinda